रिनालाई बेलुका भेटेर सँगै चिसो खाने अपरिचित युवा र भेटाउने साथी को थिए ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख १२, २०७६ समय: ११:०४:१२
पथरी । मोरङ पथरीशनिश्चरे १ मा गत शनिबार बिहान नग्न अबस्थामा मृत भेटिएकी रिना बस्नेत (रुपा) को मृत्युको बिषयलाई लिएर प्रहरीले उनकै २ जना साथीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । शुक्रबार बेलुका ५ बजेको समयमा पथरीमा आएका २ जना अपरिचित युवाहरु सँग रिनाको भेट गराउने उनका २ जना मिल्ने साथीले भेट गराई चिसो समेत पिएर छुटेको कुरा सार्बजनिक भएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई सोधपुछका लागी नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबार मात्र त्यहि मध्येकी एक साथीको मोबाईल समेत हराएको भनिएपछि घटना थप शंकास्पद बनेको छ । ती युवा को थिए ? उनीहरुको भेट किन गराईयो ? भन्ने बिषय थप शंका उत्पन्न गराएको छ । रिनाका ति दुबैजना मिल्ने साथी होटल सञ्चालक हुन ।
यसैबिच प्रहरीले रिनाको शव ईटहरीस्थित बुढीखोलामा शुक्रबार अत्येष्टि गर्ने तयारी गरेसँगै कविता पराजुलीको संयोजकत्वमा बनेको संघर्ष समितिले उनको शव पथरीमा ल्याई अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने बताएको छ । केही स्थानीयले घटनाको सत्यतथ्य सार्बजनिक नभई शव अन्त्येष्टि गर्न नहुने बताउँदै आएका छन ।
रिनाको शव शुक्रबार पथरी ल्याई नगरपरिक्रमा गरिने
पथरी । गत शनिबार मोरङको पथरीशनिश्चरे १ मा नग्न अबस्थामा मृत भेटिएकी स्थानीय ब्यबसायी रिना बस्नेत (रुपा) को शव शुक्रबार पथरी ल्याईने भएको छ । रिनाको शव शुक्रबार ११ बजे पथरी ल्याउने र नगरपरिक्रमा गराई शोकसभा गर्ने मृतकका आफन्त र संघर्ष समितिका बिच सहमति भएको छ । घटनाको सत्यतथ्य सार्बजनिक नभएसम्म उनको शव अन्त्येष्टि नगरिने समेत जनाईएको छ ।